ကယားပြည်နယ်တွင် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ပြောင်းဧက ၃၀၀ စိုက်ပျိုးမည် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
ကယားပြည်နယ်တွင် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ပြောင်းဧက ၃၀၀ စိုက်ပျိုးမည်
ကယားပြည်နယ်၏ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံဖြစ်သည့် ပြောင်းစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း Japfa Comfeed Myanmar Pte. Ltd က ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ရေနီပေါက်ကျေးရွာအနီး၊ ပွန်ချောင်းနဘေးရှိ တောင်သူများ၏ ယာမြေ (၃၀၀) ဧကခန့်တွင် ခေတ်မီပြောင်းစိုက်ပျိုးရေးစနစ် (၃) မျိုးအား ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ သုတေသန ရန်ပုံငွေဖြင့် တစ်နှစ်ကြာ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းဖေါ်ဆောင်ရန် အတွက် ကုမ္ပဏီက ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၅)ရက်နေ့တွင် တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၊ ပြောင်းစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များက ပြည်နယ်အတွင်း (၅)ကြိမ် လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းအား တစ်နှစ်ကြာ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးပြီးနောက် ရရှိသော ရလဒ်များနှင့်အတူ နှစ်ရှည်ခေတ်မီ ပြောင်းစိုက်ပျိုးရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအား ပြည်နယ်အစိုးရထံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ပြီး စိုက်ဧကနှစ်သောင်းခန့်တွင် နှစ်ရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသွားရန် လျာထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
JAPFA Comfeed Myanmar Pte Ltd သည် ရန်ကုန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန် အစားအစာများ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကယားပြည်နယ်တွင် ပြောင်းသီးနှံကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြသော်လည်း ဈေးကွက် မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က ပြောင်းစိုက်တောင်သူများ အရှုံးပေါ်ခဲ့သဖြင့် ဈေးကွက်တည်ငြိမ်ရေးအစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဒေသခံများက တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကယားပွညျနယျ၏ အဓိက စိုကျပြိုးသီးနှံဖွဈသညျ့ ပွောငျးစိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍတှငျ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး Japfa Comfeed Myanmar Pte. Ltd က ကနျထရိုကျစနဈဖွငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကယားပွညျနယျ ဘောလခဲမွို့နယျ၊ ရနေီပေါကျကြေးရှာအနီး၊ ပှနျခြောငျးနဘေးရှိ တောငျသူမြား၏ ယာမွေ (၃၀၀) ဧကခနျ့တှငျ ခတျေမီပွောငျးစိုကျပြိုးရေးစနဈ (၃) မြိုးအား ကနျထရိုကျစနဈဖွငျ့ ကုမ်ပဏီ၏ သုတသေန ရနျပုံငှဖွငျေ့ တဈနှဈကွာ စမျးသပျစိုကျပြိုးမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ လုပျငနျးဖျောဆောငျရနျ အတှကျ ကုမ်ပဏီက ကယားပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ထံ ၂၀၁၈ ခုနှဈ မလေ (၅)ရကျနတှေ့ငျ တငျပွခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး သကျဆိုငျရာကုမ်ပဏီ၊ ပွောငျးစိုကျပြိုးရေးပညာရှငျမြားက ပွညျနယျအတှငျး (၅)ကွိမျ လလေ့ာခဲ့ပွီးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ စီမံကိနျးအား တဈနှဈကွာ စမျးသပျစိုကျပြိုးပွီးနောကျ ရရှိသော ရလဒျမြားနှငျ့အတူ နှဈရှညျခတျေမီ ပွောငျးစိုကျပြိုးရေး ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုအား ပွညျနယျအစိုးရထံ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့အညီ တငျပွ ဆောငျရှကျပွီး စိုကျဧကနှဈသောငျးခနျ့တှငျ နှဈရှညျရငျးနှီးမွုပျနှံသှားရနျ လြာထားခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
JAPFA Comfeed Myanmar Pte Ltd သညျ ရနျကုနျအခွစေိုကျကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပွီး တိရိစ်ဆာနျ အစားအစာမြား ထုတျလုပျခွငျးဖွဈသညျ။
ကယားပွညျနယျတှငျ ပွောငျးသီးနှံကို အဓိက စိုကျပြိုးကွသျောလညျး ဈေးကှကျ မတညျငွိမျမှုမြားကွောငျ့ ပွီးခဲ့သညျ့ နှဈက ပွောငျးစိုကျတောငျသူမြား အရှုံးပျေါခဲ့သဖွငျ့ ဈေးကှကျတညျငွိမျရေးအစိုးရက ဆောငျရှကျပေးရနျ ဒသေခံမြားက တောငျးဆိုခဲ့ကွသညျ။